Waxaan baranay inaan ku majaajilooto sawiradayada | Abuurista khadka tooska ah
In a maqaalkii horer ayaan baranay macnaha erayga mockup iyo muhiimada isticmaalkeeda si aan ugu soo bandhigno soojeedimaheena macmiilka.
Haddii aad xiiseyneyso inaad sameyso jees jees laakiin aadan aqoon sida loo sameeyo, halkan waa a tutorial tallaabooyin aad u fudud si aad u awoodid samee mokcup kuu gaar ah. Marar badan ma helno majaajillo soo degsasho ah oo ku habboon baahiyaheenna, ama waa la siiyaa oo kuma dhacaan miisaaniyaddayada. Intaa waxaa dheer, waa inaan maanka ku haynaa inaan u adeegsanno sawir-gacmeedyadan si sax ah si loo yareeyo kharashka, ama aan lahayn eber kharash. Sidaa darteed, wax micno ah malahan in lacag lagu maalgaliyo iyaga. Sababtaas awgeed waxaan ku bari doonaa sida loo isticmaalo sawiradaada.
Photoshop si loo sameeyo jees jeeskeena
Tallaabada ugu horreysa ee la qaadayaa waa dhoofinta faylasha, ayaa lagula taliyay jpg. Kadib waxaan fureynaa Photoshop, barnaamijka ugu habboon ee aan ku abuuri karno abuurkeenna. Waxaan dhigeynaa sawirka aan rabno inaan ugu sameyno sawir-qaadista.
Marka sawirku furmo, waanu jiidi doonaa aruurinta miiska shaqada, si markii dambe wax looga beddelo.
Tallaabada xigta waa talo na caawin doonta hel jaangooyooyin. Waxay ka kooban tahay xariiqyo tixraac ah, taas oo ah, calaamadeynta aragtida "x" iyo "y" ee sawirka si aan ugu rogi karno sawirrada si waafaqsan aragtida sawirka sayidkiisa.
Sida aan ku arki karno sawirka, waa la sameeyay xariijimo jiif iyo toosan midab buluug ah leh si uu noo hago una fududeeyo howsha.
Waxaan leenahay labo ikhtiyaar, ama dooro sawirada oo dhan ama mid mid u tag. Marka la doorto, waxaan aadi doonnaa baarka sare oo waxaan raaci doonaa wadada soo socota:
Tafatir - Beddel - Qallooca
Sida aan ku arki karno sawirka hoose, waxaan qalloocin karnaa walxaha iyadoo kuxiran aragtida aan raadineyno. Adoo riixaya oo jiidaya geesaha Fagaaraha ka muuqda waan ku guuleysan karnaa innagoo ku jiideyno sida aan u jecel nahay.
Ka taxaddar maxaa yeelay haddii dhalanroggu aad u ballaaran yahay, saamayntu waxay noqon kartaa mid la yaab leh ama qalloocan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Waxaan baranay inaan sameysano jeesjeeskeena